Care Work Workshops Somali · In the Heart of the Beast Puppet and Mask Theatre
Naqshadeynta garaafka ee Jaffa Aharonov
Wadnaha Dayrta ee Bahalka ayaa bilaabmaya: Aqoon isweydaarsiyo Shaqo Caryeel oo ku saleysan Shaqada Daryeelka Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha: Cadaalada Naafada oo ku Riyoonaysa. Buuggan firfircoon waxaa iftiimiyay xigmadda iyo shaqada dheddigga curyaamiinta ah ee midabka leh, wuxuuna ku xiranyahay yahay riyooyinka, qorshayaasha, iyo martiqaadyada dhammaanteen si aan ula qabsanno nolosheenna maalinlaha ah.
Waxaa lagu soo bandhigay zoom, aqoon -is -weydaarsi kasta Oktoobar waxaa ku jiri doona wada -xaajoodka buugga oo ay weheliso wax -qabad faneed ka qaybqaadasho ah.
Aqoon isweydaarsiyada ayaa dhici doona 7:00 pm ilaa 8:30 p.m. (CDT)5-ta Oktoobar , Oktoobar 12 -keeda, Oktoobar 19 -keeda, iyo Oktoobar 26 -keeda iyadoo dabbaaldegga xiritaanka 2-da Nofeembar ay ka soo muuqdeen guddi ku hadla martida.
Aqoon isweydaarsigu wuxuu ku salaysan yahay caddaaladda naafada, helitaanka farxadda, iyo bulshada. Aqoon isweydaarsiyada waxaa fududeyn doona aegor ray iyadoo barashada fanaaniinta Nailah Taman iyo Julie Boada ay hogaaminayaan howlaha farshaxanka. La soco si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan nashaadaadka farshaxanka iyo cidda martida noo ah ee ku hadasha ay noqon doonto!
Fasiraadda ASL ayaa la bixin doonaa. Fadlan ku muuji baahi kasta oo la heli karo foomka diiwaangelinta. Hoos iska diiwaangeli dhammaan taariikhaha aqoon -is -weydaarsiga ee aad jeclaan lahayd inaad ka soo qayb gasho iyo inaad hesho xirmo farshaxan oo wata qalabyada aqoon -is -weydaarsiga. Ogow waxaan haysannaa xirmooyin farshaxan oo kooban. Alaabta loo baahan yahay waxay noqon doontaa shay laga yaabo inaad sidoo kale ka hesho agagaarka gurigaaga. Fadlan kaliya dooro inaad jeclaan lahayd in la keeno xirmada farshaxanka haddii aadan awoodin inaad qaaddo.
Halkan Guji si aad isu Diiwaangeliso:
aegor ray waa queer & trans writer, farshaxan kala duwan, iyo qabanqaabiye Mashruuca Wacyigelinta Shaqaalaha Galmada. Wuxuu xubin ka yahay Lightning Rod wuxuuna shaqadiisa ka qabtay Queertopia, Daddy, Controlled Burn(Gubitaan la xakameeyey), iyo Northern Spark. aegor wuxuu ahaa 2018-2019 Loft Literary Center Fellow in Poetry(Saaxiibka Xarunta Suugaanta) wuxuuna qorayaa aruurinta sheekooyin gaagaaban oo naxdinta leh, sheekooyin saynis ah, iyo noocyada jaceylka ah. aegor waa Sagittarius. aegor ayaa fududeyn doonta dhammaan aqoon isweydaarsiyada.
[Sawirka aegor ray. Wuu taagan yahay, wuu dhoola cadeynayaa, wuxuu xiran yahay jaakad ku daabacan shabeel oo casaan ah iyo shaar cad oo leh dahab dahab ah.]
Nailah & Julie
Nailah Taman waa queer Masaari Mareykan ah oo dhinacyo badan ka shaqaysa iyo shaqaale dhaqan oo fadhigeedu yahay Minneapolis, MN. Waxay ka qalin jebiyeen Jaamacadda Minnesota sanadkii 2015 BA iyagoo ku qaatay Farshaxanada Muuqaalka. Waxay yihiin farshaxan leh Studio 400,Hawlwadeen guud oo soo baxaya barnaamijka istuudiyaha farshaxanka BIPOC. Waxay yihiin ururiyaha xamaasad leh ee walxaha loo arko inay qaali ku yihiin halbeegyadooda. Nailah Taman ayaa hogaamin doonta hawlaha farshaxanka aqoon -isweydaarsiga Oktoobar 12-keeda iyo 26-da Oktoobar.
[Sawirka Nailah Taman. Waxay taagan yihiin istuudiyaha farshaxanka iyagoo wata waxyaabo kala duwan iyo shiraac gadaal ah. Waxay xiran yihiin maaskaro jaale ah iyo funaanad jaale ah.]
Julie Boada waa fanaanad Anishinabe, sheekeeye, barbaariyaha iyo baraha fanka. Waxay haysataa B.A. ee Farshaxanada Istuudiyaha iyo American Indian Studies-Daraasaadaha Hindida Mareykanka ee Jaamacadda Minnesota. 30kii sano ee la soo dhaafay waxay la soo shaqaysay ururada sida In the Heart of the Beast Theatre, Minnesota History Center, ArtStart, New Native Theater, Z Puppets, Fergus Falls Center for Arts iyo LA Music Center. Qaar ka mid ah mashaariicda ay jeceshahay waxay iskaashi la sameeyeen ururada farshaxanka iyo ururada kheyraadka dabiiciga ah sida DNR. Iyaga iyo ninkeeda waxay u qabtaan sagaal bandhig dalxiis oo loogu talagalay dugsiyada, maktabadaha iyo ururada bulshada, degaan ahaan iyo gobol ahaanba. Julie waxay deeq ka heshay Guddiga Farshaxanka Gobolka Minnesota, Jerome Foundation iyo Golaha Fanka ee Magaalooyinka. Waxay la wadaagtaa Abaalmarinta Ivey. Waxay aad u jeceshahay shaqada ku lug leh, isku xirta oo kobcisa hanka dhaqanka. Julie waxay hogaamin doontaa hawlaha farshaxanka aqoon-isweydaarsiga Oktoobar 5-teeda iyo Oktoobar 19-keeda.
[Sawirka Julie Boada oo leh gadaal madow. Way dhoola cadeyneysaa, waxay gashan tahay funaanad huruud ah iyo garbasaar xariir jaale ah oo leh dhego-cas.]
Muujinta Suurtagalnimada - Saabuun Lagu xardhay Julie
Oktoobar 5, 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Iska diiwaangali aqoon -isweydaarsiga Julie, “Muujinta Suuragalnimada - Xardhinta Saabuunta,” cashar gacmeed saabuun gacmeed. Aqoon-is-weydaarsigan wuxuu ka jawaabayaa wicitaan si geesinimo leh dib loogu soo ceshado bogsashada, oo ka hor imaanaysa maskaxdeena yaraanta, laga bilaabo Shaqada Daryeelka Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha: Riyada Cadaalada Naafada. Lakshmi Piepzna-Samarasinha wuxuu sharxayaa in gaar ahaan loogu talagalay Madowga, Brown, iyo Dadka Asaliga ah:
"In badan oo naga mid ah ayaa nala baray laga soo bilaabo da 'yar in daryeelka, jilicsanaanta, iyo bogsashadu ay ahaayeen kuwa dadka kale ... Waxaan ku fadhinnaa dhaxalka yaraanta, iyo badbaadada iyo murugada qoto dheer ee aan la soo diyaarin taas oo mararka qaar dadka ka dhigaysa mid qadhaadh iyo cadho marka ay arkaan qof wax weydiinaya ... ” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 130)
Casharka xardhinta saabuunta ee Julie waxay ka qaadanaysaa dhiirrigelin erayadan, oo ku qotoma geeddi-socodka, gaabis ah oo ula kac ah. Waxaan dib u soo celinnaa lakabyo saabuun ah, annaga oo sharfanna siyaabaha ay maskaxda yaraanta labaduba noo nooleeyeen oo aan u hayno caqabadda qoraaga: in aan sameyn karno wax ka badan si fudud oo aan ku badbaadi karno, in aynaan ka tagin, laakiin aan is taageerno.
Calaamadaha Baradhada oo leh Nailah
Oktoobar 12-keeda, 7: 00- 8:30 p.m.
“Calaamadaha Baradhada,” waa aqoon-isweydaarsiga samaynta shaambada baradhada. Aqoon isweydaarsigan waxaa dhiirrigeliyay fikradda ah “ka tegidda caddaynta”ee Shaqada Daryeelka: Riyada Cadaalada Naafada.
Dhaqdhaqaaqa Caddaaladda Naafada Mia Mingus ayaa xoogga saareysa muhiimadda ay leedahay in laga tago caddaynta, “Caddaynta inaan halkan joognay, inaan jirnay, inaan badbaaday oo aan jeclayn oo xanuunsannay. Caddaynta dhammaystirka annagu weligeen ma dareemin iyo dareenka baaxadda leh ee buuxnaanta ayaan is siinnay. Caddaynta cidda aan nahay, kan aan u malaynay inaan nahay, kan aan waligeen ahayn inaan noqonno. Caddayn midba midka kale u hayo si ay u jiraan siyaabo kale oo lagu noolaan karo - badbaado hore; go'doomintii hore. ” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 81)
Aqoon isweydaarsigan, farshaxanka farshaxanka badan Nailah Taman ayaa kugu hagi doona samaynta shaambadda si aad "uga tagto caddaynta" adiga oo abuuraya sawirro iyo astaamo matalaya naftaada iyo adduunka kugu xeeran.
Xirfadaha Isku-xirnaanta, 3-Tilmaan-cabbir oo leh Julie
Oktoobar 19, 7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Maxay u egtahay bulsho daryeesha? “Xirfadaha isku-xirka, 3-Tilmaan-cabbir” waa cashar ka-qaybgal ah oo saddex geesood ah. Waxqabadkan farshaxanka waxaa dhiirrigeliyay fikradda daryeelka wadajirka ah, oo looga hadlay qoraaga Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha’s Shaqada Daryeelka: Riyada Cadaalada Naafada. Qoraagu wuxuu qeexayaa daryeelka wadareed macnaheedu waa:
“U beddelidda ururadeenna inay noqdaan kuwa ay dadku dareemaan inay fiicnaanayaan haddii ay xanuunsadaan, ooyaan, baahi qabaan, bilaabaan xilli dambe sababtoo ah basku wuu jabay, tartiib ayuu u socdaa, kuwa ay cunto ka yihiin shirarka, dadku waxay ka shaqeeyaan guriga, waxyaalahanna ma aha wax raali gelin ka bixi” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 108).”
Qabanqaabiyaha caddaaladda bogsashada iyo qoraa, Yashna Maya Padamsee waxay xoogga saareysaa, daryeelka wadajirka ah ma aha is -daryeelid, ama, “mas'uuliyaddayada shaqsiyeed inaan ka tagno shaqada goor hore, aan guriga tagno - keligaa - oo aan qubeysanno, aado jimicsiga, cunno xoogaa cunto ah iyo seexo... ” (Lakshmi Piepzna-Samarasinha, 2018, p. 108). Taa bedelkeeda, daryeelka wadareed micnaheedu waa shakhsiyaad iyo jaaliyado is-qeexaya sida caafimaadka iyo fayoobaantu u eg tahay, waxay u baahan tahay koror wadareed si loo daboolo baahiyahaas. Daryeelka wadareed micnaheedu waa in bulshadu aysan cidna ka tegin.
Casharkii tolidda ee saddex-cabbir ee Julie wuxuu astaan u yahay quruxda, kakanaanta, iyo daruuriga dhammaan qaybaha bulshooyinka aan jeclahay. Kaalay oo soo gal oo ku riyo daryeelka daryeel wadareed!
Calaamadda Zine oo leh Nailah
Oktoobar 26-deeda, 7:00 p.m.- 8:30 p.m.
Sideen u qori karnaa sheekooyin cusub, u muujin karnaa aragtiyo cusub, oo ku saabsan helitaan dhab ah, oo aan ku noolaan karno? Dhaqdhaqaaqan farshaxanka zine-ka-samaynta ayaa si qoto dheer u dhex galaya Shaqada Daryeelka: Riyada Cadaalada Naafada. Aqoon-is-weydaarsigan, waxaad ku xulan doontaa oo ku tusin doontaa xigashooyinka buugga. Waxaad samayn doontaa zine oo xuddun u ah mabaadi'da caddaaladda naafada. Nagu soo biir, si aad u riyootid waxa caddaaladda naafadu dhab ahaan adiga kuugu eg tahay!